Fepetra | Fomba tsara indrindra mahafotsy Teeth Guide
Tonga soa eto amin 'ny toerana. Raha manohy mijery sy hampiasa tranonkala ity ianao, dia manaiky ny hanaraka ary ho voafatotry ny manaraka fepetra ny fampiasana, izay miaraka amin 'ny fiainana manokana ny vohikala politika mifehy ny fifandraisan'ny aminareo raha oharina amin'ny vohikala ity.
Ny teny hoe ny toerana, na 'antsika’ na 'isika,’ dia manondro ny tompon'ny vohikala. Ny teny hoe 'anao’ manondro ny mpampiasa na ny mpijery ny tranonkala. Ny fampiasana tranonkala ity dia iharan'ny manaraka ireto fepetram-pampiasana:
Ny afa-po ny pejy ity vohikala dia noho ny vaovao ankapobeny sy ny fampiasana ihany. Tsy mety miova tsy misy filazana.
Ary tsy izahay na antoko fahatelo misy fiantohana na manome antoka ny amin'ny marina, fotoana nilany azy, fampisehoana, feno na ny vady sahaza ny vaovao sy ny fitaovana hita, na nanolotra ao amin'ny tranonkala ity ho an'ny tanjona manokana. Ianao manaiky fa toy izany vaovao sy ny fitaovana mety misy inaccuracies na fahadisoana ary mazava manavaka madio na inona na inona izany na hadisoana inaccuracies araka izay fara heriko navelan'ny lalàna.
Ny fampiasana ny misy vaovao na ny fitaovana ao amin'ny vohikala ity dia tanteraka eo ny mety, fa izay isika, dia tsy ho mendrika. Ary ho anareo kosa ny andraikitra mba hahazoana antoka fa misy entana, asa na ny fanazavana azo tamin'ny alalan'ny vohikala ity hihaona ny fepetra takiana manokana.
Ity tranonkala dia mirakitra zavatra izay tompony na fahazoan-dalana ho antsika. Ity hafatra ity dia ahitana, fa tsy voafetra ho, ny famolavolana, fisehon'ny, mijery, tarehiny sy ny sary. Miteraka dia voarara hafa noho araka ny zon'ny mpamorona filazana, izay tsy ampy anisan'ny ireo fepetra.
Volen'ny famantarana rehetra amin'ity tranonkala, izay tsy ny fananan'ny, na fahazoan-dàlana ho any amin'ny mpandraharaha, dia Niaiky ao amin'ny tranonkala.
Tsy nahazoan-dalana ny fampiasana ny vohikala ity dia mety hahatonga ny milaza ny fahasimbana sy / na ho heloka bevava.
Indraindray izany dia mety ihany koa ny vohikala ahitana rohy amin'ny tranonkala hafa. Ireo rohy dia nanome Mba tsy hanahirana anao mba hanome fanazavana fanampiny. Tsy midika fa manohana ny tranonkala(S). Tsy manana andraikitra ny votoatin'ny ny mifandray tranonkala(S).
Mety tsy mamorona rohy ity vohikala avy amin'ny tranonkala hafa na ny antontan-taratasy tsy misy ny toerana mialoha tsoratra ny fanekena.